नागरिकको अटेरीपन : सेनाले ख्वै हजुरको मास्क भन्दा हत्केलाले मुख छोप्दै अघि बढ्दै - Himali Patrika
नागरिकको अटेरीपन : सेनाले ख्वै हजुरको मास्क भन्दा हत्केलाले मुख छोप्दै अघि बढ्दै
हिमाली पत्रिका ६ मङ्सिर २०७७, 6:45 pm
गोविन्द खड्का / युगबोध
दाङ। ख्वै हजुरको मास्क ? मास्क नलगाएर घोराही बजार हिड्नेलाई शुक्रवार दिउँसो नेपाली सेना र प्रहरीले सोध्थ्यो, जवाफमा हे भगवान भन्दै लजाउँथे ।
हत्केलाले छेकिदै लुसुक्क अघि बढ्थे । उनिहरु अलि पर परसम्म पुग्दा पनि मुसुक्क मुसुक्क लजालु हाँसो हाँस्दै गरेका देखिन्थे ।
अहिले कोरोना बढ्या छ, असइ विवेक रसाईलीले सम्झाउँदै भने, यत्रो छ\_ सात महिना लकडाउन हुँदा पनि सचेत नहुनु लाजमर्दो कुरा हो । यति भन्दा सर्वसाधारणका मुहार लाजले रातो रातो हुन्थ्यो ।
कतिपयले हिनतावोध गर्थे । अली पर पुगेर फर्किहैर्दै खित्किन्थे । ठुलै अफ्ठेरोबाट फुत्केको संकेत गर्थे ।
ठिक छ । लगाउँछौ । भन्दै हत्तपत्त मास्क गोजीबाट झिकेर लगाउनेको जमात धेरै थियो । तिनलाई अझै पनि रातदिन मास्क लगाउ भन्नुपर्ने ? भनेर प्रहरीले खौकिदै नैतिक दबाब दिन्थ्यो । त्यसरी हिड्नेलाई प्रहरीले अटेरी पना भनेको छ । जानीजानी बुझ पचाएको रुपमा व्याख्या गरेको छ । स्वास्थ्य सचेतना नभएको र गैह्रजिम्मेवार जस्ता शब्द प्रयोग गरेको सुनिन्थ्यो ।
बच्चाका दुई हात समातेर बिचमा हिडाल्दै गरेकाहरु आफूले मात्रै मास्क लगाएका भेटिन्थे । कति बच्चा समातेकाले पनि मास्क लगाएका थिएनन् ।
बच्चालाई गाह्रो हुन्छ हजुर । मास्क लगाइदिनुस् । सेनाका प्रतिनिधिले मास्क दिँदै सम्झाउँथे । बच्चा बोकेर हिड्दै गरेका ज्यामी देखि सवारी साधनमा हुइकिनेसम्म धेरैको मुखमा मास्क थिएनन् । पढेलेखेका जस्ता देखिने, ठाँट परेर हिड्ने तथा वाइक स्कुटीमा सवारले पनि मास्क लगाएका थिएनन् ।
कतिपयले भने मास्क, चश्मा लगाएर बाइक चलाउन नसकिने बताए । वाईक स्कुटीमा चश्मा अनिवार्य चाहिन्छ । मास्कमा ठोक्किएर निस्केको सास चश्मातिर उक्लीन्छ ।
त्यसले चश्माको सिसामा कुहिरो जस्तो बनाएर मधुरो पार्छ । सिसामा ढुँडी लागेजस्तो हुन्छ आँखा सडक देख्न सक्दैन । कि चश्मा कि मास्क छोड्नुपर्छ । भन्ने उनिहरुको तर्क थियो ।
झोलामा हाल्याछु भनेर कतिले बाटैमा झोला बिसाइ खोतलखातल पारी मास्क निकालेका थिए । कुनै वेला पुलिसले खोजे देखाउनुपर्छ भन्नेमा सचेत थिए ।
मेरै लागि हो लगाउँछु भन्नेमा विश्वस्त थिएनन् । पसलबाहिर घाम ताब्दै एकसुरे बसेकाहरु मास्क ख्वै भन्दा झसङ् गर्थे । हतार हतार भित्र पसेर पोकाबाट निकाली लगाउँथे ।
मैलो मास्क लगाएकाले फेरे । केहीका मुखका मास्क थुकका छिटासहितका मयलका राङ्टाले घिनलाग्दा देखिन्थे ।
कोरोना जान्नेहरुमा छ के मास्क नलगाएको व्यवसायमा पुगेर टोलीले भन्दै थियो, यत्रो पसल छ, एउटा मास्क लगाउन लोभ मान्नुहुन्छ ।
अझ अगाडि बढेर टोलीले थप्दै थियो, सरकारले निशेधाज्ञा भन्छ, लकडाउन गर्छ, तपाईहरुको यहि गैर जिम्मेवारीपनले हो । वस चलाउनै लागेका बेला सहचालक दौडदै मास्क किन्न पसलभित्र छिरे ।
जसरी भोला किन्न दौडन्छन् त्यत्तिकै मास्क किन्न हतार थियो । विर्सन पाईयो सम्झन जरुरी छ है । भन्दै थियो । तिनलाई मास्क ख्वै अभियान टोलीले भन्यो, यात्रुलाई पनि मास्क अनिवार्य लगाउने भन्नुस है ।
विना मास्क समुहमा हिडेकाहरु त झन् भाग्न खोज्थे । टोलीले न भाग्नुस् नभाग्नुस यता आउनुस् भन्थ्यो । उनिहरुलाई डर भन्दा लाज बढि रहेको भावभंगीले जनाउँथ्यो ।
सिधा नजर लगाउन सक्दैन्थे । टोलीतिर फर्किए पनि हत्केला वा चुन्नीको सहाराले लाज छेक्न खोज्थे । ज्यान बाँचनुपर्छ खान त पाईहाल्नुहुन्छ फुल्की खाँदै गरेकालाई भनेपछि हो हजुर हो भनेर सहमति जनाए ।
चाटका ठेलामा पुगेर टोलीले फुल्की खाएपछि लगाई हाल्नुहोला है भन्यो ।
माथि लगाउनुस् चिउँडोमा भयो टोलीले सबैभन्दा बढि यहि बाक्य बोलेको सुनिन्थ्यो । कतिले दाह्रीले असजिलो हुन्छ भनेर मास्क घाँटीमै झारेका थिए । लगाउँदै नलगाई निर्धक्क ढलक ढलक गर्नेहरु पनि उत्तिकै थिए ।
कतिले तल्लो ओठसम्म मास्क लगाएका थिए । कतिको मुख छोपेका तर नाक खुल्ला थियो । धुलो नाकै बाट भित्र पस्छ भन्ने नजाने जस्तै लाथ्यो ।
कमलापसन्द, भोला, मेघा श्री, शुद्धप्लस तथा पानलगाएतका गुट्खा चपाउँदै थुक उछिट्याउनेलाई मास्क बाधक भएको छ ।
थुकका छिटाले चाँडै मैलिन्छ र चपाउँदै प्याच्च प्याच्च थुक्दै गर्न मिल्दैन । चपाउँदै हिडेका अधिकांशको मुखमा मास्क थिएन ।
कलिला नानीबाबु हातमा मास्क हल्लाउँदै हिडेका थिए । युवा युवती बैसले मस्किदै खित्किदै हिड्दा पनि मास्क लगाएका थिएनन् । पाका महिलाहरुमा भने धेरैको मास्क थियो ।
कोरोना र धुलोबाट बच्नकै लागि मास्क जरुरी छ । रोगबाट नबचाए पनि आत्मवल बढाउँछ । कोरोनाबाहेक अरु रोगबाट बचाउँछ ।
घाँटी, फोक्सो लगाएतलाई सुरक्षा गर्छ । त्यसैले पनि मास्कमा जोड दिएको टोलीको भनाई थियो । टोलीका अनुसार बजारको धुलो धुवाँ भित्र मास्क अनिवार्य छ ।
मास्क नभई भीडभाड तथा समूहमा जानै हुँदैन । सकभर दैनिक नभएर एक दिन विराई त्यति नभ्याएपनि साप्ताहिक रुपमा मास्क ख्वै अभियान चलाउन धेरैले सुझाव दिएका छन् । कहिल्यै मास्क नलगाएको आनीवानी बदल्न केही दबाब तथा डर त्रास देखाउनैपर्छ ।
23 सेकेन्ड अगाडि